Ururka suxufiyiinta Somaliyeed ee NUSUJ oo doortay hoggaan cusub. – Radio Daljir
Muqdisho, May 30 – Ururrka suxufiyiinta Somaliyeed ee NUJOS ayaa doortay hoggaan cusub.
Doorashada hoggaanka cusub ayaa waxaa ku guuleystey Md. Burhaan Axmed Daahir oo hore u ahaa xoghayaha guud ee dallada suxufiyiinta Puntland ee MAP, iyo wakiilka NUSOJ ee Puntland.
Xoghaynta ururka NUSOJ ayaa sidoo kale loo doortey Md. Bakistaan oo wakiil uga ahaa Muqdisho wakaalada Rueturs, halka la doortay gudiyada ururka.
Burhaan Axmed Daahir, gudoomiyaha cusub ee ururrka NUSOJ oo u warramay idaacadda Daljir ayaa sheegey in uu aad u faraxsan yahay xilka loo doortqay, uuna ku han weyn yahay in uu si-badel ku sameeyo hannanka shaqo ee ururka; waxaa uu xuay in ay wax weyn ka badaleen dastuurka iyo xeerarkii uu hore ugu shaqeyn jirey ururku.
Mar uu ka hadlay xilkii uu u hayay suxufiyiinta Puntland ayaa uu sheegay in uu mas’uuliyaasi ku wareejinayo suxufiyiintii hoggaanka cusub ee ururka MAP, isaga oo intaas raaciyey in uu wax badan ka qabtey hawlaha saxaafada ee Puntland mudadii uu xilka hayay; waxaa uu sheegay in uu dhawaan imaan doono Puntland si uu ula kulmo suxufiyiinta Puntland.
Guddoomiyaha cusub ee ururrka suxufiyiinta Somaliyeed ee NUSOJ ayaa walaac xoogan ka muujiyay xaalada suxufiyiinta Somaliyeed ay maanta ku sugan yihiin, waxaana uu ballan qaaday in uu culuska saari doono daryeelka iyo dhawridda xuquuqda saxaafadda, ayna ogol yihiin in lala xisaabtamayo, isla markaana rajo weyn ay ka qabaan mas’uuliyadaan loo magacaabey in ay si fiican u gudan doonaan.